ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ပုသိမ် အင်္ဂလိကန် အသင်းတော်သားများရဲ့ မမရေချစ်လို့ - Cele GabarCele Gabar
လတ်တလော အလွတ်တန်း ပြန်ဆိုတေးလောကမှာ ခေတ်စားနေတာကတော့ ဘနားနားလေး ရဲ့ မမရေချစ်လို့ဆိုတဲ့သီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘနားနားလေး ရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ပုသိမ် အင်္ဂလိကန် အသင်းတော်သားတွေက Country( ကျေးလက်သီချင်း) ပုံစံတီးခတ်ပြီး ပြန်ဆိုခဲ့တာပါ.
မြူးကြွတဲ့ သံစဉ်တွေကို ကိုယ်ပိုင် တယော နဲ့ တူရိယာတွေပေါင်းစပ်ပြီး ပြန်ဆိူခဲ့တဲ့ဒီသီချင်းဟာ ကြားရသူတိုင်း ကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ဖော်ျဖြေမှုဟာ ဒီနေ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က ရေပန်းအစားဆုံး ဗီဒီယိုဖြစ်နေကြောင်း သိရကြောင်းပါရှင်။
Source- Soundofmusic Anglican
ပျေါပွူလာဖွဈနတေဲ့ ပုသိမျ အင်ျဂလိကနျ အသငျးတျောသားမြားရဲ့ မမရခေဈြလို့
လတျတလော အလှတျတနျး ပွနျဆိုတေးလောကမှာ ခတျေစားနတောကတော့ ဘနားနားလေး ရဲ့ မမရခေဈြလို့ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးဖွဈပါတယျ။ဘနားနားလေး ရဲ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျကို ပုသိမျ အင်ျဂလိကနျ အသငျးတျောသားတှကေ Country( ကြေးလကျသီခငျြး) ပုံစံတီးခတျပွီး ပွနျဆိုခဲ့တာပါ.
မွူးကွှတဲ့ သံစဉျတှကေို ကိုယျပိုငျ တယော နဲ့ တူရိယာတှပေေါငျးစပျပွီး ပွနျဆိူခဲ့တဲ့ဒီသီခငျြးဟာ ကွားရသူတိုငျး ကို ပြျောရှငျစခေဲ့ပါတယျ။သူတို့ရဲ့ ဖြေျာဖွမှေုဟာ ဒီနရေဲ့ လူမှုကှနျရကျပျေါက ရပေနျးအစားဆုံး ဗီဒီယိုဖွဈနကွေောငျး သိရကွောငျးပါရှငျ။
Previous Previous post: လပြည့်နေ့ ဘုရားသွားဖူးရင် မှတ်ပုံတင်လိုတယ်ဆိုတဲ့ နေဆန်း(မိတ်ကပ်)
Next Next post: မြင်သူတိုင်းအားကျခဲ့တဲ့ မျိုးမင်းစိုးရဲ့ လက်ရာ သိန်း(၁၅၀၀) တန် ပလက်တီနမ်ထိုင်မသိမ်း
Published: February 15, 201911:30 am
မူးယစ်သားကောင်တွေ အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ပြောဆိုပေးလိုက်တဲ့ ကျားပေါက်
Published: December 13, 20186:48 pm
အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ကို အသိပေးကြေညာလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
Published: March 15, 201911:27 am Updated: 11:28 am
တရုတ်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကြောင့် နောက်ဘဝ မြန်မာမင်းသားမဖြစ်ချင်တော့တဲ့ ကျော်သူ
Published: February 15, 20194:18 pm
အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို မျှဝေလိုက်တဲ့ ဟန်နာယူရီ
Published: December 20, 20183:24 pm